Qarax aan cidina wax ku noqon, loolana dan lahaa xeer ilaaliyaha gobolka Bari, oo ka dhacay magaalada Bossaso. – Radio Daljir
Qarax aan cidina wax ku noqon, loolana dan lahaa xeer ilaaliyaha gobolka Bari, oo ka dhacay magaalada Bossaso.
Bossaso, Jan 31 – Qarax nooca gacanta lagu haga ah ayaa ka dhacay wadada laamiga ah ee weyn ee dhex marta magaalada Bossaso; qaraxa, oo sida la xaqiijiyey loola dan lahaa xeer ilaaliyaha gobolka Bari, ayaa ka dhacay goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah, balse aanay cidina wax noqon.
Gudd. gobolka Bari C/xaafid Cali Yusuf oo aan ka waraysanay qaraxa ayaa sheegay in uu soo maray goobta uu qaraxu ka dhacay, wax khasaare ahna aany gaysan, inkasta oo goobta uu qaraxu ka dhacay ay ahayd meel ay ku sugnaayeen dad badan oo shacab ahi.
Md. C/xaafid ayaa xaqiijiyey in qaraxa loola dan lahaa xeer ilaaliyaha gobolka Bari oo sida uu sheegay ku sugnaa meel aan ka fogayn goobta uu qaraxu ka dhacay.
Taliyaha ciidanka bileyska ee gobolka Bari oo aan isna wax ka weydiinay fal-dambiyeedkan ayaa sheegay in ay wadaan baarimtaan ku saabsan cidda ka dambeeya qaraxa, ayna saxaafada u soo gudbin doonaan xogta marka ay soo gunaanadaan baaritaanka.
Magaalada Bossaso ayaa in dhawaale ka raysatay qaraxyada iyo dilalka madaxda dawlada iyo indheergaradka gobolka.